श्वेताको ‘कान्छी’ सुटिङ एक महिना सर्यो, तर किन ? « Ramailo छ
श्वेताको ‘कान्छी’ सुटिङ एक महिना सर्यो, तर किन ?
समय : 9:45 am
नायिका तथा निर्मात्री श्वेता खड्काले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘कान्छी’ को छायाँकन एक महिना पर सारेकी छिन् । यही असारको पहिलो सातादेखि सुरु हुने गरी तयारी थालिएको फिल्मको सुटिङ अब साउनको पहिलो साताबाट मात्रै सुरु हुनेछ । सबै तयारी पूरा गरेकी श्वेताले किन सारिन् त ‘कान्छी’ को सुटिङ ?
‘माझी बस्तीले गर्दा सुटिङ एक महिना पर सारेका हौं’ गत साता मात्रै माझी बस्तीको शिलान्यास गरेकी श्वेताले भनिन्, ‘एक महिना बस्तीको काममा मात्रै समय दिनु पर्ने हुन्छ । बस्तीको काम हल्का भएपछि मात्रै सुटिङ सुरु गर्छु ।’ आकाश अधिकारीको निर्देशन रहने फिल्म ‘कान्छी’ मा श्वेताको अपोजिटमा अभिनेता दयाहाङ राई प्रस्तुत हुँदैछन् । एक वर्ष भित्रमा भूकम्प प्रभावित ६३ माझी बस्तीका घर धुरी बनाउने श्वेताको लक्ष्य छ ।